Tag: te hahafanta-javatra | Martech Zone
Tag: te hahafanta-javatra
Alahady, Jolay 6, 2014 Alahady, Jolay 6, 2014 Douglas Karr
Izahay dia nizara infografika hafa momba ireo singa ao anaty votoatin'ny virus ary misalasala foana aho manosika ny viral ho tetikady. Ny votoatin'ny viriosy dia mety hitondra fahatsiarovan-tena amin'ny marika - hitantsika matetika amin'ny horonan-tsary. Na izany aza, mbola tsy nahita olona nikapoka azy io foana aho isaky ny avy. Ny sasany miezaka mafy, ny sasany tsy mahomby… fitambarana talenta sy vintana tokoa izay mampiakatra be ny votoatinao. Izany dia nilaza fa mino aho fa ny tetika nampiasaina rehefa nifantoka
Hitanareo ve ny nataoko teo? Linkbait total, cheesy, off-the-chart… ary niasa. Eto ianao satria nanoratra lohateny fandefasana bilaogy tamin'ny fomba manokana aho. Ity ny paikady lehibe amin'ny tranokala toa an'i Upworthy sy Buzzfeed ary nahasarika mpamaky an-tapitrisany izy ireo tamin'ny fanitsiana ny lohatenin'izy ireo hanana singa fototra roa ihany… ny fahalianana sy ny fihetsem-po. Ny fahalianana - amin'ny fanonona zavatra 2, ny sainao dia manomboka manontany tena ary ny fakam-panahy manindry